कसले भडकाउन खोजे जनकपुर ? - www.sahayatra.com कसले भडकाउन खोजे जनकपुर ? - www.sahayatra.com
Home > Headlines > कसले भडकाउन खोजे जनकपुर ?
गएको ४/५ गते मस्यौदा संकलनको क्रममा मधेशका जिल्लाहरुमा व्यापक प्रतिकारको आन्दोलन भयो । जसका कारणमा पुर्व देखि पश्चिम सम्मका मधेशका जिल्लाहरुमा सुझाव संकलन कार्यक्रम प्रभावित भएको देखियो । मध्य मधेशको धार्मिक नगरी जनकपुर चाही केन्द्रको रुपमा देखिए । किनकी त्याहा सबै भन्दा कडा प्रतिवाद भयो र त्यही कारणमा धनुषा जिल्लामै प्रहरीले सुरक्षा दिन इन्कार गरे पछि सुझाव संकलन स्थगीत गरियो ।
तर ५ दिउसो अचनाक प्रहरीले जनकपुरको प्रसिद्ध जानकी मन्दिरको प्रागंनमा पेटोल बम फेला पारको हल्ला चले पछि स्थीती झनै तनावमा परिणत भयो । प्रहरीले जानकी मन्दिरमा बम फेला पारेको कुरा वाहिर धेरैले थाहा समेत पाएन । तर त्यही निहूमा प्रहरीले जनकपुरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरीरहेका युवा सरोज मिश्रालाई निर्घात कुटपिट गरे सम्म बेलुकी जानकी मन्दिर नजिकै एउटा बालकलाई मरनासन्न हुने गरी कुटे । उनको अहिले पनि विराटनगरमा उपचार भईरहेको छ । हालै राष्टिय मानव अधिकार आयोगले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो दुई घटनामा प्रहरीले व्यापक वल प्रयोग गरेको बताएका छन ।
५ गते जानकी मन्दिरको प्रारगंनमा अचनाक पेटोल बम फेला परे पछि मानअधिकार आयोगले स्थानिय सुरक्षा अधिकारीहरुलाइ त्यसवारेमा तत्कालै सचेत समेत गराएका थिए । धनुषाका एक प्रहरी अधिकारीले यो संवाददातासंग ७ गते नै जानकी मन्दिरमा आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलन भडकाउनका लागी त्यस्तो दुश्प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए । तर धनुषाका प्रहरी प्रमुख गणेश थापाले जानकी मन्दिरमा नभई मन्दिर नजिकै रहेको प्रहरी विटमा त्यस्तो बम फेला परेको भन्दै घटनावारे खासै बोल्न चाहेनन । उनले भने, हामी त प्रष्ट छौ कि चौकी माथी आक्रमणको प्रयासका साथ उक्त बम फालिएको थियो । तर जानकी मन्दिरको मुल प्रागंनवाट धेरै टाढाको पश्चिम कुनामा प्रहरी विट छ ।
जनकपुरको स्थलगत अध्यन समेत गर्न पुगेकी राष्टिय मानव अधिकार आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले जानकी मन्दिर जस्तो आम नागरिकको ठुलो धार्मिक आस्था संग जोडिएको ठाउमा त्यसरी बम फेला पर्नुलाई समान्य रुपमा लिनु नहुने बताए । जानकी मन्दिरको ठिक पछाडी पश्चिम तिर मूस्लीम समुदायको मस्जीद पनि छ ।
प्रहरीले आन्दोलनकारीहरु माथी आरोप लगाईरहेका छन, भने आन्दोलनकारीहरुले प्रहरी माथी । आन्दोलनकारीहरुको भनाईमा ४ गते देखि नै पुर्ण रुपमा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेको जानकी मन्दिरको भित्री प्रागंनमा कसरी र कसले बम हाल्यो ? यो आफैमा रहस्यको विषय देखिन्छ । जनकपुरमा आन्दोलनको नेतृत्व गरीरुहेका युवाहरुको संघर्ष समिती मास नामक संस्थाका अध्यक्ष सरोज मिश्राले प्रहरीले आन्दोलनलाई बदनाम गराएर सम्प्रादायीक भाडभैलौ गराउन यस्तो चालवाजी गरेको आरोप लगाए । मिश्राका अनुसार प्रहरीले सुरुमा जानकी मिन्नरमा प्रारगंनमा रहेको एटिमवाट पैसा लुटियो भन्ने हल्ला पनि फैलाएका थिए । त्यस पछि जानकी मिन्दरको पछाडी पटी रहेको मुस्लीम बस्ती तिर अचानक रुपमा दुगामुडा समेत भयो, मिश्रा भन्छन, प्रहरीले सुनियोजित रुपमा मुस्लीमहरु लाई भडकाउने प्रयास गरियो तर जनकपुरका मुस्लीम अगुवाहरुको सुझवुझका कारण अवस्था संयमित मै सिमित रहन गयो । यद्यपी प्रहरी अधिकारीहरुले त्यसलाई ठाडै अस्विकार गर्दै आएका छन ।
मानव अधिकार आयोग कि सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार पछिल्ला समयमा जनकपुरमा देखिएको प्रहरीको भुमिका चाही एकदमै संशकास्पद छ । अन्सारी भन्छन, केन्द्रमा धार्मिकताको वारेमा यस्तो वहसहरु चलीरहेको वेला जनकपुर जस्तो ठाउमा देखिएको घटनाले समाजमा आतंक, द्धन्द र दंगा फैलाउने वाहेक अरु केही गर्दैन ।
अन्सारी भन्छन, मधेशमा अहिले सम्म देखिएको हरेक दंगा जसरी सुरु भए पनि अन्तमा गएर हिन्दू र मुस्लिममा परिणत हुन गरेको विगत छ, त्यसैले यस्तो संवेदनशिल कुरामा प्रहरी प्रशासन समेत खेलाची जस्तो देख्नु देशकै दुर्भाग्यपुर्ण कुरा छ ।
जनकपुरमा के हुदै छ ?
केही समय अघि देखि नै जनकपुरको हरेक मन्दिर र चौक चौकमा काग्रेस जिल्ला कार्यस्मितीको नाउमा हिन्दू राष्टको पक्षमा वोर्डहरु झुण्डाएको देखिन्छ । यसमा काग्रेसका स्थानिय नेताहरुको सक्रियता गजवको देखिन्छ । केही समय अघि जनकपुर क्षेत्रमै केही सशस्त्र समुह पृष्टभुमि भएकाहरुले पनि फेसवुक लगायतका सन्जाल मार्फत जनकपुर क्षेत्रलाई टार्गेट गरेर हिन्दूमाथी अनावश्यक प्रहारहरु भईरहेको चर्चाहरु फैलाउन लागी परेको देखिन्छ । स्थानिय स्तरमा केही महत्वपुर्ण अन्र्तक्रिया र गोष्ठीहरु समेत त्याहा भएको जनकपुरका स्थानिय पत्रकारहरु बताउछन । कतिपय कार्यक्रमहरु त काग्रेसकै व्यानरमा भएको पनि देखियो । तर केन्द्रलाई यसवारेमा केही थाहा छ कि छैन, त्यो कसैलाई पतो पनि छैन ।
Item Reviewed: कसले भडकाउन खोजे जनकपुर ? Rating:5Reviewed By: Amrendra yadav